Fomba fanariana kodiarana any amin'ny firenena maro | Bestyre
Ny fanodinana kodiarana fako dia lohahevitra iray nanahiran-tsaina ny governemanta sy ny indostria, nefa koa olana manerantany. Fantatra fa amin'izao fotoana izao, ny fanariana kodiarana fako na ny ankamaroan'ny fanamboarana voalohany, fanavaozana ny kodiarana fako, fampiasana angovo mafana, famonoana hafanana, famokarana rubber vita amin'ny laoniny, vovoka vita amin'ny fingotra ary fomba hafa.
Mampiasà fiovan'ny prototype: amin'ny alàlan'ny fametahana, fanapahana, totohondry, hanova ireo kodiarana taloha ho an'ny seranan-tsambo sy ny sambo, hiarovana ny onja, jiro mitsingevana, efijery manda eny amin'ny arabe, famantarana ny lalana ary haran-dranomasina mpanjono, fialamboly, sns.
Kodiarana fako pyrolysis: mora hiteraka fandotoana faharoa, ary ny kalitaon'ny fitaovana fanodinana dia ratsy sy tsy milamina, tsy amin'ny fampiroboroboana an-trano.
Kodiarana namerina namaky: ny fomba mahazatra indrindra hanimbana kodiarana fiara ampiasaina dia ny fanapahana ny dian-tongotra, noho izany ny kodiarana namboarina indray dia iray amin'ireo fomba lehibe hampiasana kodiarana taloha.
Mampiasà kodiarana fako hamokarana fingotra voaary: ny famokarana fingotra voaary dia manana tombony ambany, hamafin'ny asa, dingana famokarana lava, fanjifana angovo lehibe, fandotoana tontolo iainana matotra ary lesoka hafa, noho izany ny firenena mandroso dia mampihena ny vokatry ny fingotra voaarona isan-taona, kasaina hanakatona ny ozinina vita amin'ny rubber.
Etazonia: fanodinana dragona mavitrika
Tao anatin'izay taona faramparany, Etazonia dia tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ara-teknolojia, hampiroborobo ny fanodinana kodiarana fako, hampiroborobo fatratra ny fivoaran'ny tsena fanodinana kodiarana fako. Maherin'ny 80 isanjaton'ny kodiarana ampiasaina any Etazonia no voaverina na ampiasaina isan-taona, ary 16 tapitrisa mahery amin'izy ireo no reconditioned. Araka ny maso ivoho miaro ny tontolo iainana amerikana, ny ankamaroan'ny kodiarana ampiasaina dia miditra amin'ny tsena telo: solika azo avy amin'ny kodiarana, fingotra an-tanety ary fampiharana injeniera sivily. Isaky ny taona, manodidina ny 130 tapitrisa ny kodiarana efa lasa mpamokatra kodiarana, izay no fomba fampiasa indrindra amin'ny kodiarana ampiasaina.
Alemana: politika fanodinana teknolojia fitsaboana matotra manohana feno
Ny vondrona Genan any Eropa no orinasa fanodinana kodiarana lehibe indrindra manerantany, manodina kodiarana fako maherin'ny 370.000 taonina isan-taona, ary mamokatra potika sy vovoka vita amin'ny fingotra izay mety hahatratra ny fahadiovana avo lenta, saika tsy misy loto mihitsy. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny lalana asfalta, kianja lalana, turf artifisialy, azo ampiasaina amin'ny famokarana kodiarana, fehikibo conveyor ary famokarana vokatra hafa, ho famenon-tsakafo sy solony amin'ny fingotra voajanahary, manampy ny fiarahamonina hamonjy loharanon-karena vita amin'ny tany.
Japon: taha ambony amin'ny famerenana ny kodiarana taloha
Any Japon, ny kodiarana fako dia madiodio indrindra amin'ny alàlan'ny orinasa fanodinam-bokatra, tobin-tsolika, fikolokoloana sy fanamboarana fiara, ary orinasa fanodinam-bokatra nopotehina. Ao Japon, ny kodiarana dia tsy azo ariana toy ny fako amin'ny toerana fanangonana fako. Ny tompona fiara dia tokony hifandray amin'ny orinasa fanodinam-bola mba hanangonana ireo kodiarana fako, ary mazàna ny orinasa fanodinana dia mila mandoa ny sarany fanodinana rehefa manangona ireo kodiarana fako.
Kanada: mamaly mavitrika ny scrap ho an'ny vaovao
Tamin'ny 1992, ny lalàna kanadiana dia nametraka fa ny tompony dia tsy maintsy manolo ny kodiarana amin'ny famaohana rehefa manova ny kodiarana, ary arakaraka ny famaritana ny kodiarana isan-karazany dia mandoa 2.5 ~ 7 yuan amin'ny fanodinana kodiarana sy ny saram-pako, dia manangana vola manokana.